Bit By Bit - su'aalo Waydiinta - 3.6.2 weydiinta Tayeysan
Inkasta oo ay noqon karaan kharriban, weydiinta hodan noqon kartaa awood.
Hab A kala duwan si wax looga qabto incompleteness xogta raad digital waa in ay si toos ah u kordhiyaan xogta sahanka, hanaanka ah in waxaan wacayaa weydiinta hodan. Mid ka mid ah tusaale ahaan ka mid ah la duldhigay la xoojiyey waa daraasadda of Burke and Kraut (2014) , kaas oo aan ku tilmaamay hore ee cutubka (Qaybta 3.2), oo ku saabsan in lalana on Facebook waxay kordhisaa xoog saaxiibtinimo. Haddii ay sidaa tahay, Burke iyo Kraut weheliso xogta sahanka la xogta log Facebook.
goob ah in Burke iyo Kraut ayaa ku shaqeeya, si kastaba ha ahaatee, macnaheedu yahay in iyagu ma ay u leeyihiin in ay la laba dhibaato weyn in cilmi samaynaya wejiga weydiinaya hodan ka qabtaan. First, dhab ahaan wada isku xirta sets-a xogta ku xirid nidaamka loo yaqaan diiwaanka, ku habboon ee rikoor ka mid dataset rikoor ku haboon in dataset-noqon kartaa mid adag oo baadi-nugul (waan arki doonaa tusaale kale ah ee dhibaatadan hoose ). Dhibka labaad ee ugu weyn ee la duldhigay la xoojiyey waa in tayada oo ka mid ah raad digital inta badan ay noqon doontaa adag tahay cilmi si ay u qiimeeyaan. Tusaale ahaan, mararka qaarkood habka loo marayo taas oo waxaa la soo ururiyey waa lahaansho iyo waxay noqon kartaa nugul dhibaatooyinka badan ee lagu qeexay cutubka 2aad si kale loo dhigo, weydiinta hodan inta badan ku lug doonaa xiriirinaya baadi-nugul ee sahan ilo xog madow-sanduuq oo aan la garanayn tayada. Inkasta oo walaac ah in labadan dhibaatooyinka soo bandhigo, waxaa suurtagal ah si ay u qabtaan cilmi muhiim ah oo la qorshahan sidii lagu soo bandhigay by Stephen Ansolabehere iyo Eitan Hersh (2012) in ay cilmi-baaris ku saabsan qaabka cod-bixinta ee dalka Mareykanka. Waa qiimo lahayn in ay u gudbo daraasaddan si faahfaahsan qaar ka mid ah, sababtoo ah qaar badan oo ka mid ah xeeladaha in Ansolabehere iyo Hersh horumaray ay noqon doonto faa'iido badan ee codsiyada kale ee la duldhigay la xoojiyey.
qaybqaadasha Cod ayaa mawduuca cilmi ballaaran ee cilmiga siyaasadda, iyo in la soo dhaafay, fahamka cilmi 'ah kuwaas oo cod iyo sababta guud ayaa ku salaysan falanqaynta xogta sahanka. Codbixinta Mareykanka, si kastaba ha ahaatee, waa dhaqan aan caadi ahayn ee in diiwaanka dawladda in muwaadin kasta ayaa u codeeyay (of course, dowladda ma qoraan kuwaas oo mid kasta oo muwaadin codadka). Sanado badan, kuwaas oo diiwaanka codbixinta dawladeed ahaayeen heli karaa qaabab warqad, kala firdheen oo xafiisyo kala duwan oo dawladda hoose ee wadanka oo dhan. Tani waxay ka dhigtay in ay adag tahay, laakiin ma aha wax aan macquul aheyn, maxaa yeelay, saynisyahano siyaasadeed u leedahay in sawir buuxa oo codbixiyayaasha iyo inay is barbar dhigaan waxa ay dadku sheegayaan in sahan ku saabsan u codeeyeen in ay dhaqanka dhabta ah codbixinta (Ansolabehere and Hersh 2012) .
Laakiin, hadda waa kuwan diiwaanka codeynta ayaa si digital ah, iyo tiro ka mid ah shirkadaha gaarka loo leeyahay ayaa si nidaamsan ururiyey iyo biireen diiwaanka codbixinta si ay u soo saaraan files sayidkiisa cod dhamaystiran in ay u qoraan dabeecadda codbixinta oo dhan Maraykanka. Ansolabehere iyo Hersh garab ka mid ah shirkadaha-Catalist kuwan LCC-si ay u isticmaalaan file codbixinta sayidkiisa si ay u caawiyaan horumarinta sawir fiican ee codbixiyayaasha. Dheeraad ah, sababtoo ah waxa ay isku hallaysay diiwaanka digital ururiyey iyo curated by shirkad, u bixiyey qaar ka mid ah faa'iidooyinka badan dadaalka hore cilmi in lagu samayn lahaa, oo aan gargaar ka mid ah shirkadaha iyo isticmaalka xogta analog.
Sida badan oo ka mid ah ilaha raad digital ee Cutubka 2aad, file naakhudihii Catalist ma waxaa ka mid ah in badan oo macluumaad ah dadka, u arkaan taas, iyo dabeecadda in Ansolabehere iyo Hersh loo baahan yahay. Waxa intaa dheer in macluumaadkan, Ansolabehere iyo Hersh ahaayeen gaar ahaan xiiso barbar dhaqanka codbixinta sheegay in dhaqanka codbixinta la ansixiyey (ie, macluumaadka ku qoran database Catalist ah). Sidaas daraaddeed, cilmi ururiyey xogta ah in ay doonayeen oo qayb ka ah Cooperative kongareeska Doorashada Study (CCES), a sahanka bulshada ballaaran. Next, cilmi siiyey xogta si Catalist, iyo Catalist siiyey cilmi dib file a mideeyey xogta in ka mid ah la ansixiyey dhaqanka codeynta (ka Catalist), dabeecadda codaynta is-warramay (ka CCES) iyo tirada bulshada iyo dabeecadaha jawaabeyaasha (ka CCES ). In si kale loo dhigo, Ansolabehere iyo Hersh hodan xogta codbixinta la xogta sahanka, iyo keentay file soo biiray wuxuu awood u siinaysaa inay wax ka qaban in file mana shaqsi karti.
By kobciya faylka Catalist sayidkiisa xogta la xogta sahanka, Ansolabehere iyo Hersh saddex gunaanad muhiim yimid. First, in ka badan-warbixinta ee codaynta waa baahsan, ku dhowaad nus ka mid ah non-cod sheegay codbixinta. Or, ay jid kale u eego waxa at waa haddii qof sidaana codbixinta, waxaa jira fursad ah 80% in ay si dhab ah u codeeyay. Second, in ka badan-warbixinta ma aha random, in ka badan-warbixinta ku badan yahay ka mid ah dakhliga sare, sidoo kale-bartay, Awliyadiisa kuwaas oo ku hawlan arrimaha guud ee dadweynaha. In si kale loo dhigo, dadka ay u badan tahay in ay codeeyaan sidoo kale ugu badan tahay inuu la jiifsado oo ku saabsan codbixinta. Marka saddexaad, iyo ugu adag, sababta oo ah nooca nidaamsan ka badan-warbixinta, kala dhabta ah ee u dhexeeya codbixiyayaasha oo aan cod waa yar yahay waxay u muuqdaan uun ka soo sahan. Tusaale ahaan, kuwa la degree ah iskaabulo yihiin oo ku saabsan 22 dhibcood Boqolkiiba u badan tahay in ay soo sheegaan codbixinta, laakiin waa boqolkiiba 10 dhibcood u badan tahay inay doorashada dhabta ah. Dheeraad ah, ee hadda jira aragtiyo khayraadka ku salaysan ee codaynta waa aad u fiican ee saadaalinta yaa sheegi doona cod ka badan kuwaas oo run ahaantii votes, raadinta ah taaban karo in oo ku baaqay in aragtiyaha cusub si ay u fahmaan iyo saadaaliyo codbixinta.
Laakiin, sida badan waa in aynu ku kalsoon tahay natiijada kuwanu? Xusuusnow natiijooyinkan ku xiran tahay isku xirta baadi-nugul xogta madow-box la tiro aan la garaneyn oo baadi. More si gaar ah, natiijada oo waxgal laba talaabo oo muhiim ah: 1) awoodda Catalist in la isu geeyo ilo badan oo xogta kala duwan si loo soo saaro ah datafile sax sayidkiinna iyo 2) awoodda Catalist in link xogta sahanka ay datafile sayidkiisa. Mid kasta oo ka talaabooyinkan waa kuwo ku adag iyo khaladaad tallaabo mid keeni kara cilmi u gunaanad qaldan. Si kastaba ha ahaatee, labada data processing oo ku habboon waa muhiim u ah jiritaanka sii of Catalist sida shirkad sidaa daraadeed waxa maal karaa khayraadka xalinta dhibaatooyinka, kuwaas oo, inta badan ee miisaanka a in aan cilmi-shaqsi waxbarasho ama group of cilmi dhigma karo. In reading sii dhamaadka cutubka, waxaan ku tilmaami dhibaatooyinkan faahfaahsan iyo sida Ansolabehere iyo Hersh dhiso kalsoonida natiijada. Inkastoo faahfaahinta ayaa gaar ku ah daraasaddan, arrimaha la mid ah, kuwaas oo ku kici doonaa, waayo, cilmi kale doonaya in ay link to madow-box ilaha xogta raad digital.
Waa maxay casharada guud cilmi sawiri karaa daraasaddan? First, waxaa jira qiime wayn ka kobciya raad digital la xogta sahanka. Labaad, inkasta oo kuwan darka, ilaha xogta ganacsiga waa in aan la tixgeliyo "Runta dhulka", mararka qaarkood waxay noqon kartaa mid waxtar leh. Dhab ahaantii, waxa ugu wanaagsan in la is barbar kuwaas oo xogta ilaha aan xaqa buuxda (laga bilaabo, taas oo ay had iyo jeer ku dhici doonaan gaaban). Saas ma aha, waxaa wanaagsan in la isbarbardhigo in ilo kale oo macluumaadka la heli karo, taas oo wariyaasha ay leeyihiin qaladaad sidoo.